Soo dejisan Hay Day 1.29.98 – Vessoft
Soo dejisan Hay Day
Hay Day – ciyaar caan ah si ay u maareeyaan beeraha iyo horumarinta beeraha ah. Maalinta Hay kuu ogolaanaya in aad ku beeri badarka oo kala duwan, soo ururin beergooyska, guryo bay dhisan oo is ogow of xayawaanka guriga. Ciyaarta waxaa jira lacagta birta ah iyo waayo-aragnimo dhibcood taasoo ciyaaryahanka hesha ee horumarinta beeraha ah oo loo isticmaalo si loo kordhiyo heerka ama ganacsiga iyo ciyaaryahano kale. Maalinta Hay sidoo kale taageertaa isgaarsiinta ee chat, ayaa u ogolaanaya ciyaaryahan si ay ugala hadlaan arrimaha kala duwan si loo hagaajiyo gameplay ah. Ciyaaryahanka uu awood u leeyahay in Customize wargelinta iyo wadaagaan guulaha la saaxiibo ka Facebook.
Maareynta nidaamka Easy
Fursadaha Wide ee horumarka
Ganacsiga iyo ciyaaryahano kale
Isgaarsiinta ee chat
Comments on Hay Day:
Hay Day Software la xiriira:
Games Ku haboon codsiga shirkadda waalka si ay ula socdaan сloseouts ciyaarta. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad la socotid waxa kulan aad saaxiibo yihiin ciyaaro iyo hadli iyaga la qolalka chat.
العربية, English, Українська, Français... Agar.io 1.3.1
Games Kulan Arcade ayaa la gameplay xiiso leh ee tartankaan online ciyaartoyda kale. In ciyaarta waxaa jira tricks taatiko kala duwan iyo gunno gaar ah kala duwanaanta gameplay ah.
العربية, English, Українська, Français... FIFA 15 Ultimate Team 1.5.5
Games Qabille oo kubada cagta ayaa leh wax badan oo ka mid ah ciyaartoyda halyeeyada, kooxaha iyo horyaalada kubada cagta. Kulankaan ayaa wuxuu isticmaalaa sawiro tayo sare leh iyo dhaqdhaqaaqa macquul ah ee ciyaartoyda.
English, Français, Español, Deutsch... Clash of Clans 8.212.12
العربية, English, Українська, Français... Swamp Attack 2.0
Games Kulan Arcade ayaa si ay u ilaaliyaan guriga ciyaaryahan weerar ku saabsan xayawaanka waalan. Kulankaan ayaa habab badan si ay u ilaaliyaan guriga ka dhanka ah xayawaanka oo leh sifooyin iyo xirfada kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... Megapolis 2.21
العربية, English, Українська, Français... The Simpsons: Tapped Out 4.14.0
Games Kulan xiiso leh ayaa waxaa la abuuray ka dib markii taxanaha eponymous aamusnaan ah. Ciyaaryahanka ayaa ka filan kartaa adventures xiiso leh jilayaasha ugu cadcad.
Games software The raaxo leh Kumaan badan oo ah waxyaabaha ciyaaraha ee qaybaha kala duwan ee kala duwan iyo qiimaha ka aagga ganacsiga digital caalamka.
العربية, English, Українська, Français... PicsArt 5.8.0
Photo Editor ayaa image graphic oo taageero ka helaya saamaynta badan iyo sida diirada. Software waxay leedahay waxyaalaha aasaaska ah ee bulshada iyo dukaan dhisay-in qalabka ay u saxaa.
العربية, English, Українська, Français... Tango 3.14.134034
Webcams Isgaarsiinta Voice Tool isgaarsiinta u dhexeeya dadka isticmaala oo dunida ah. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay u sameyso wicitaano cod iyo video ama wadaagaan fariimaha qoraalka ah.
العربية, English, Українська, Français... Clean Master 5.12.1
Ayna System Tababaraha caanka ah ee maamulka file iyo nidaamka ayna. Software ayaa awood u si ay u falanqeeyaan xaaladda ka mid ah qalabka iyo nadiifinta nidaamka shaqo u soo saar badan.